Shiinaha Soosaarayaasha Bulldozer SD6N iyo Alaab-qeybiye | Xuanhua
SD6N cagaf-cagaf waa 160 hooras nooca-dozer waddo toos ah Haydarooliga wadata, semi-adag ganaax iyo kontaroolada Haydarooliga. Waxaa ku qalabeysan mashiinka naaftada ee Shangchai C6121 oo lagu soo saaray liisanka Caterpillar. Mashiinku wuxuu leeyahay astaamaha isku-dheelitirnaanta xoogga weyn ...
SD6N cagaf-cagaf waa 160 hooras nooca-dozer waddo toos ah Haydarooliga wadata, semi-adag ganaax iyo kontaroolada Haydarooliga. Waxaa ku qalabeysan mashiinka naaftada ee Shangchai C6121 oo lagu soo saaray liisanka Caterpillar. Mashiinku wuxuu leeyahay astaamaha isku-dheelitirnaanta karti-weyne ee korantada iyo awoodda ka-hortagga xad-dhaafka ah. Xuddunta wareejiyuhu waa badeecad koronto-farsamo oo awooddeeda loo qaybiyo bannaanka, taas oo leh astaamaha kala duwanaanta waxtarka ballaaran. Isteerinka iyo bareeggu waxaa lagu xakameyn karaa isla lever xakamaynta. Nidaamka Fiireynta wuxuu adeegsadaa qaab dhismeedka koronto ku kordhinta, taas oo ku habboon oo badbaadinta shaqada. Qalabka gawaarida ugu dambeeya wuxuu leeyahay astaamaha qiimaha isku dheelitirnaanta barokaca. Naqshadeynta noocan ah waxay sare u qaadeysaa awoodda dhalista waxayna dheereyneysaa waqtiga waxtarka leh. Darawalka ugu dambeeya wuxuu sidoo kale adeegsadaa qaab-dhismeedka in nadiifintiisa wax lagu nadiifiyo ka madax bannaan tahay hagaajinta, taas oo ku habboon adeegga. Baarka barbaraha wuxuu adeegsadaa qaab dhismeedka saliidayn lacag la’aan ah si loo yareeyo qiimaha adeegga.
Miisaanka hawlgalka (oo ay ku jiraan ripper) (Kg): 16500
Min. nadiifinta dhulka (mm): 445
Awoodda seexinta (m): 4.5
Balladda daab (mm): 3279
Ugu badnaan qodida qoto dheer (mm): 592
Qiyaasaha guud (mm): 503732973077
Kacaan la qiimeeyay (rpm): 1900
Awoodda duufaanta (KW / HP): 119/162
Ugu badnaan Xuddunta (Nm / rpm): 770/1400
Isticmaalka shidaalka ee la qiimeeyay (g / KWh): 215
Sprocket-ka ayaa laastikada sare loo qaaday: 7
Goobta (mm): 203
Baaxadda kabaha (mm): 560
Horay u soco (Km / h) 0-4.0 0-6.9 0-10.9
Dib udhac (Km / h) 0-4.8 0-8.4 0-12.9
Soo saarida nidaamka L / min: 178
Beddelka Xuddunta: Isku-dhafka ka-baxsan banaanka
Gawaarida kama dambaysta ah: Darawalka kama dambaysta ah waa la dhimayaa laba jibbaar leh qalabka spur iyo sprocket-ka qaybta.
Hore: TY160-3 cagaf
Xiga: TS160-3HW Bulldozer